महरा संसद नजानुको कारण के हो ? भन्छन्, ‘पहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्र दाङ जान्छु’ | Diyopost
काठमाडौँ, फागुन ११ । संसद सचिवलयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जर्वजस्ती करणी गरेको आरोपमा १३३ दिन जेलमा गुजारेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा रिहा भएको हप्ता दिन बिति सक्दा पनि संसदमा फर्केका छैनन् । उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फागुन ५ गते सफाई दिए पछि रिहा भएका थिए ।
उनीमाथि लागेको आरोपलाई अदालतले झुटो ठहर गरिदिएको छ । निर्दोष सावित भएको कारण सांसदमा स्वतः रहिरहन्छन् । सांसदको जिम्मेवारी यथावत् रहेतापनी महरा हालसम्म पनि संघिय संसदको वैठकमा भाग लिन गएका छैनन् । उनि नफर्कनुको कारणबारे जनताको आ–आफ्नै टिप्पणी छ ।
रिहा भएपछि महरा ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरुसंग भेटघाटमै ब्यस्त छन् । रिहा भएपछि उनलाई समर्थन गर्ने नेता कार्यकर्ताहरु दिनदिनै भेट्न पुग्छन् । बिहानदेखि बेलुकीसम्मै भेटघाट र छलफलमा ब्यस्त रहने उनी केही समय जनतामा फर्किन चाहेको बताउँछन् ।
उनी संचारमाध्यमहरुसँग भने कुरा राख्न चाहँदैनन् । संसदमा किन नफर्किनु भएको ? भन्ने प्रश्नमा महरा भन्छन्, “म केही समय संसद जान्न । पहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छु, त्यहाँ जनतालाई भेट्छु, त्यसपछि मात्र संसदमा फर्किन्छु ।” उनले जनताको बिस्वास, माया र समर्थनलाई आफुले सधै आत्मसाथ गरेको बताए ।
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट विजय हासिल गरेका उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रिय सदस्य हुन् । उनीे १४ हजार १ सय ४५ मतान्तरले बिजयी भएका थिए । “महरा सरलाई नेपाली जनताको साथ छ, उहाँ फेरि संसदमा फर्केको हामी हेर्न चाहान्छौँ ।” खुमलटारमा उनलाई भेट्न गएका एकजना कार्यकर्ताले बोले । उता महरा दांङ आउने कुराले त्यहाँका जनता उत्साहित बनेका छन् । “हामी महरा सरलाई स्वागत गर्न आतुर छौँ”, एक कार्यकर्ताले बताए ।
महरा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ जाने मिति भने तय भएको छैन । सकेसम्म चाँडै मिलाएर जाने उनको योजना रहेको छ । जनता आफ्नै समर्थनमा रहेको कुरामा पनि उनि विश्वस्त देखिन्छन् । आफुलाई योजनावद्ध ढंगले झुठमा फसाइएको कुरा धेरैजसोले बुझिसकेको र बिस्तारै सबैले बुझ्ने उनि बताउँछन् ।